DISADISAM-PIANAKAVIANA :: Mpirahalahy nifanindrona antsy • AoRaha
DISADISAM-PIANAKAVIANA Mpirahalahy nifanindrona antsy
Mbola miady mafy amin’ny fahafatesana vokatry ny tsindron’antsy miisa iraika ambin’ny folo nataon’ny rahalahiny ka nahazo ny faritra maro amin’ny vatany ity lehilahy iray, manodidina ny 40 taona, tao Antsirabe. Raha ny filazan’ ny havan’izy ireo dia efa matetika mifanditra izy mirahalahy.
Samy efa nandeha nipetraka tany amin’ny faritra izy roa lahy saingy rehefa nisotro ronono ny rainy dia niverina nipetraka tao ilay zandriny. Nisara-panambadiana kosa ny zokiny, izay manana olana ara-pahitana. Io zandriny io ihany no naka sy nitondra azy hiverina ao amin’izy ireo.
Fotoana vitsy taorian’ny niverenan’izy mirahalahy niara-nonina no niseho matetika ny ady sy fifandirana. Zary tsy nahataitra ireo mpiara-monina intsony izany. Niseho indray izany, omaly maraina. Na nandre azy roa lahy nifamaly aza ireo olona akaiky azy dia tsy rototra loatra raha tsy efa nahare ny antso vonjin’ilay zokiny avy any an-tokotany.
Tsy tafavoaka hijery ny zava-nitranga akory ny rain’izy ireo, araka ny fantatra, no indreo efa tafiditra teo am-bavahady ny fianakaviana monina manodidina. Ny zokiny efa nitsirara sy nihoson-dra no hitan’ny rehetra sady novonjena haingana.
Nentina tsaboina ao amin’ny hôpitaly Atsimo ilay maratra mafy. Naterina any am-pelan-tanan’ny pôlisy kosa ilay zandry olona voatondro ho nahavita nanindrona antsy ity rahalahiny.
Faritra • Samihafa
Fakana an-keriny kandidà Tra-tehaka ilay voatondro ho namatsy basy ny jiolahy
FITSARAM-BAHOAKA :: Lehilahy nodoran’ny fokonolona
FIFAMALIANA TAO AN-TOKANTRANO :: Nandositra ilay vehivavy voatondro ho nahafaty ny vadiny